မန္တ​လေး ​ဂေဇက်​ လျှို့ဝှက်​မှတ်​တမ်း​ပျောက်​ဆုံးခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မန္တ​လေး ​ဂေဇက်​ လျှို့ဝှက်​မှတ်​တမ်း​ပျောက်​ဆုံးခြင်း
မန္တ​လေး ​ဂေဇက်​ လျှို့ဝှက်​မှတ်​တမ်း​ပျောက်​ဆုံးခြင်း
Posted by ရာမည on Oct 6, 2013 in Creative Writing, Members, Short Story | 15 comments
ကျွန်ုပ်​သည်​ မှုခင်းမှတ်​တမ်းများကိုဖတ်​ရှုခြင်းမှ ငြီး​ငွေ့လာသဖြင့်​ ယ​မန်​​နေ့က ထုတ်​​ဝေ​သော နံမည်​ကြီးဂျာနယ်​တစ်​​စောင်​အား
လှနိ​လှော ဖတ်​ရှု​နေမိလေသည်​ ။
တစ်​​နေရာသို့​ရောက်​​လေ​သော်​ ​အောက်​​ဖော်​ပြပါထူးဆန်း​သော ​ကြော်​ငြာအား
​တွေ့ရှိသဖြင့်​ အကြိမ်​ကြိမ်​ ဖတ်​​နေမိ​လေ၏။ ​ကြော်​ငြာမှာ …….
….. နှစ်​လွှာ​ပေါင်းလို့ တစ်​ရွက်​ဖြစ်​ ​သော၊
လျှပ်​စစ်​ သံလိုက်​စက်​ကွင်းတို့သည်​ ရ​ကောက်​နာရီ တစ်​ဝက်​ခန့်​တွင်​ ဆယ့်​တစ်​မီးငြိမ်း​သော​နေ့၌​ ဆုံကြမည်​ ……
အကြိမ်​ဖန်​များစွာ ဖတ်​ရှုစဉ်းစားပါ​သော်​လည်း ကျွန်ုပ်​၏ ညံ့ဖျင်းလှ​သော ဦး​နှောက်အတွင်း၌ အ​ဖြေထွက်​မလာသဖြင့်​ အတ္တကိလမထ အနုယောဂ ကိုပွါးများခြင်းမှ​ကင်း​စေ​သောငှါ ထိုဂျာနယ်​အား အပြီးအပိုင်​ပိတ်​သိမ်းလိုက်​ရ​လေ​တော့သည်​ ။
သို့​သော်​… ထို ထူးဆန်း​သော​ကြော်​ငြာသည်​ကား ကျွနု​ပ်​၏မှတ်​ညဏ်​ထဲတွင်​ ထုတ်​မရသည်​ဖြစ်​၍ မကြာခဏသတိယ​နေ​လေ​တော့သည်​ ။
ငယ်​စဉ်​ကာလက ဖတ်​ခဲ့ဖူး​သောဝတ္ထုများတွင်​ပါရှိ​သော လူဆိုးဂိုဏ်းများ အခြင်းခြင်း အချက်​ပြ​သော ​ကြော်​ငြာ​ပေ​လော ဟု ​တွေး​မိ​နေ​သေးပြန်​၏ ။
မည်​သို့ပင်​ဖြစ်​​စေကာမူ ကျွန်ုပ်​မှာ စိတ်​ထဲတွင်​ ခိုးလိုးခုလုဖြစ်​လျက်​ သုံးရက်​တာမျှ သည်းခံ​အောင့်​အီးထားခဲ့​လေသည်​ ။ သုံးရက်​​မြောက်​​သော​နေ့တွင်​မူ မည်​သို့မျှ မခံစားနိုင်​​တော့သည်​ဖြစ်​သဖြင့်​ မိတ်​​ဆွေကြီးကိုမြင့်​​ကျော်​အား ဖွင့်​​ပြော၍​မေးမြန်းတိုင်​ပင်​ရန်​ ချိန်းဆိုလိုက်​ရ​လေ​တော့သည်​ ။
ကျွန်ုပ်​တို့ အမြဲတမ်း ထိုင်​​နေကြ​ဖြစ်​​သော လှည်းတန်းအိုင်​တီလက်​ဖက်​ရည်​ဆိုင်​သို့​ရောက်​​လေ​သော်​ လက်​ဖက်​ရည်​နှင့်​မုန့်​များမှာယူပြီး… ကိုမြင့်​​ကျော်​မှ..
“ ဆိုပါဦး အိုင်​အိုရဲ့… ဘာ​တွေများ ထူးခြားလို့လဲဗျ ”
“ ထူးပါ​သော်​​ကော ..ကိုမြင့်​​ကျော်​ရယ်​… ဒီ​ကြော်​ငြာဟာပုံမှန်​မဟုတ်​ဖူးဆိုတာ​တော့သိ​ပေမယ့်​ ဘာကိုဆိုလိုပြီး ဘယ်​သူ​တွေက ဘာ​ကြောင့်​ ​ထည့်​သလဲကို ​တွေးမရလို့ဗျို့ .. ဒါနဲ့ပဲ ခင်​ဗျားကို ဒုက္ခပေးရ တာဘဲဗျာ..”​
ဟု ​ပြောရင်း … ကျွနု​ပ်​မှ ၄င်း​ကြော်​ငြာပါ​သောဂျာနယ် ကိုပြလိုက်​​လေသည်​ ။
ကိုမြင့်​​ကျော်​မှာ အဆိုပါ​ကြော်​ငြာအား တစ်​ချက်​မျှ ဖတ်​ကြည့်​ပြီးလျှင်​ ကျွနု​ပ်​ထံသို့ပြန်​​ပေးရင်း…
“ အိုင်​အို…. မန်းတ​လေး ​ဂေဇက်​ လျှို့ဝှက်​အသင်း ဆိုတာကြားဖူးသလား”
” မကြားဖူးဘူး ကိုမြင့်​​ကျော်​… ဘယ်​လိုပတ်​သက်​လို့လဲ ​ဗျ”..
ကိုမြင့်​​ကျော်​မှာ လက်​ဖက်​ရည်​တစ်​ငုံ​သောက်​၍ စီးကရက်​အားတစ်​ချက်​မျှ ဖွာရှိုက်​ပြီး​နောက်​…..
” ဒီလိုဗျ … အိုင်​အိုမသိ​သေးဘူးဆိုရင်​ နဲနဲ​တော့​ပြောရ​သေးတာ​ပေါ့… ဒီအသင်းကို ဘယ်​သူကဘယ်​လိုရည်​ရွယ်​ချက်​နဲ့တည်​​ထောင်​တယ်​ဆိုတာ အတိအကျမ​ပြောနိုင်​​ပေမယ့်​ အခုထိ​တော့ လျှို့ဝှက်​​နေထိုင်​လှုပ်​ရှားတာကလွဲပြီး ဘာမှ​တော့ မသင်္ကာ စရာမ​တွေ့​သေးဘူဗျ။
သူတို့ကိုဦး​ဆောင်​ တဲ့သူက​တော့ အ​မေရိကားမှာ​နေပြီး Kai (ခိုင်​) လို့နာမည်​ခံထားတယ်​။ ​ယောက်​ကျားအသွင်​ယူ ထား​ပေမယ့် ကျား/မ မကွဲပြား​ပါဘူး ။ အသင်းဝင်​​တွေဟာ နိုင်​ငံအသီးသီးမှာ အလွှာ​ပေါင်းစုံက​နေပါဝင်​​နေတယ်​ ။ အချင်းချင်းလည်း လျှို့ဝှက်​နာမည်​မှတပါး မ​တွေ့ဘူး မသိဖူးကြဘူးဗျ ။ ထိတ်​ပိုင်း ​ကိုယ်​စားလှယ်​တချို့ပဲ ဘဝမှန်​ကိုသိရှိပြီး အချင်းချင်းမြင်​ဘူး​တွေ့ဘူးကြတယ်​ ။ အများအားဖြင့်​ ပရဟိတလုပ်​ငန်း​တွေကို တခြားအဖွဲ့အစည်းနံမည်​ခံပြီးလုပ်​တတ်​ကြတယ်​။ ဆို​တော့ …..
အိုင်​အို​တွေ့တဲ့​ကြော်​ငြာဟာ သူတို့​ခေါင်း​ဆောင်​အချင်းချင်း​တွေ့ဆုံဖို့ ချိန်းဆိုတာဘဲဖြစ်​လိမ့်​မယ်​ဗျ ” …
ဟု ရှည်​လျားစွာ ရှင်းပြ​လေ၏ ။
“ဒါဆိုလည်း ပြီးတာပါဘဲဗျာ… နို့..​နေပါဦး .. ခင်​ဗျားသူတို့ချိန်းတဲ့စာ ​ဖော်​နိုင်​လားဗျ .. ”
” အတိအကျမဟုတ်​​ပေမယ့်​ ကျုပ်​နည်းကျုပ်​ဟန်​နဲ့ ခန့်​မှန်းနိုင်​ပါတယ်​အိုင်​အို…. ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်​ဗျာ .. ​နေ့ရက်​ နာရီကို အရင်​စဉ်းစားရင်​ … ရ​ကောက်​နာရီတစ်​ဝက်​လို့ဆိုထား​တော့ .. မြန်​မာအက္ခရာမှာ ရ​ကောက်​နဲ့တူတာ ခွန်​နှစ်​မဟုတ်​လား ..၊ ဆို​တော့ ခွန်​နှစ်​နာရီခွဲ​ပေါ့ဗျာ..ပြီ​တော့ .. ဆယ့်​တစ်​မီးငြိမ်း​သော​နေ့ဆို​တော့
၁၁ ရက်​​နေ့​တော့မဖြစ်​နိုင်​ဘူး ။၁၁ ရက်​​နေ့က​ကျော်​သွါးပြီ ။ ​ပေါင်းခြင်း ၁၁ ရတဲ့ ၂၉ ရက်​​နေ့ပဲ ဖြစ်​လိမ့်​မယ်​..။ နှစ်​လွှာ​ပေါင်းမှတစ်​ရွက်​ဆို​တော့ ..စွယ်​​တော်​ရွက်​​ပေါ့ဗျာ.. လျှပ်​စီးပတ်​လမ်းလို့ လဲဆိုထားပြန်​​တော့..
အင်း… မဟုတ်​မှလွဲ​ရောဗျာ ..ဟို ဆင်​​ရေတွင်းမှတ်​တိုင်​နားက စွယ်​​တော်​ရွက်​လျှပ်​စစ်​ကျွမ်းကျင်​သင်​တန်းများလား မဆိုနိုင်​ဘူး ..”
ကျွနု​ပ်​မှာ ကိုမြင့်​​ကျော်​စဉ်းစားအ​ဖြေထုတ်​သွားပုံကို တအံ့တသြ​ငေးကြည့်​ရင်း အားကျစိတ်​များပင်​ ဖြစ်​မိ​နေ​သေးသည်​ ။
ကျွနု​ပ်​တို့နှစ်​ဦးသား ​ရောက်​တတ်​ရာရာများ​ပြောဆိုပြီးလျှင်​ အသီးသီး လမ်းခွဲ၍ ပြန်​လာခဲ့ကြ​လေ​တော့သည်​ ။
အထက်​ပါကိစ္စများ ဖြစ်​ပွါးပြီး​နောက်​ .တစ်​ပတ်​ခန့်​မျှကြာ​သော်​ ………
” ဆရာ ….. အပြင်​မှာ ဆရာ့ကို​တွေ့ချင်​လို့တဲ့… ဝင်​ခွင့်​​တောင်း​နေတယ်​ ဆရာ ”
” ဘယ်​သူ တဲ့လဲ ​မောင်​တိုး ”
“ပဒုမ္မာ ..တဲ့ … ကိစ္စက​တော့ ဆရာနဲ့​တွေ့မှ​ပြောမယ်​တဲ့ ..”
ကျွနု​ပ်​မှာ အသိအငြိမ့်​မင်းသမီးများထဲမှ ပဒုမ္မာ ဆိုသူရှိမရှိ အလျင်​အမြန်​ပင်​စဉ်းစားရ​လေ​တော့သည်​ ။
ကျွနု​ပ်​ ​တွေး၍ မဆုံးမှီပင်​ တိုးညှင်းညင်​သာ​သော ​ခြေသံတို့ကိုကြားရပြီး​နောက်​ ….
” ကျွန်​မ ဝင်​ခဲ့ပါရ​စေရှင်​”… ဟု တည်​ငြိမ်​​အေးချမ်းသည့်​ အမျိုးသမီးတစ်​ဦး၏ အသံကို ဦးစွာ ကြားလိုက်​ရ​လေ​တော့သည်​ ။
ခိုင် ဆိုတာ ယောက်ကျားရော မိန်းမပါ အမည်ခေါ်လို့ရတယ်လေ
နောက်ထက် ဘူတွေ ပါလာဦးမလဲ
ပဒုမ္မာ ဆိုတာနဲ့ အငြိမ့်မင်းသမီးနာမည်လို့ ဘာဖြစ်လို့ စဉ်းစားရတာလဲ အ်ိုင်အိုဂျီးရဲ့။
အင်း ဓာတ်ဘူးကြီး မြင်တာထက်တော့ တော်ပါသေးတယ်လေ…
ဆပ်ပြာတို့ ငှက်ဖျားပျောက်ဆေးတို့ ဆို ပိုဆိုးအုံးမယ်။
အဲ့ဒီ အငြိမ်း မင်းဒမီး က
ဆရာနဲ့ တွေ့မှ ပြောမယ်ဆိုဒေါ့ကာ …
ဟီး..လျို့ဝှက်အသင်းကြီးက မင်းသမီးတော့ ပေါ်လာပြီ…. အကြာကြီးမစောင့်ခိုင်းနဲ့တော့ ဦးဦးရဲ…
ဒါနဲ့ .. စကားအတင်းစပ်..
“မန်းတ​လေး ​ဂေဇက်​ လျှို့ဝှက်​အသင်း ” ဆိုပါလား၊ ဆိတ်ဝင်စားစရာပဲ
အာတီဒုံ ကတော့ ကိုရမညဆီ လှို့ဝှက် ဂဇက်စာအုပ်ရောင်းဖို့သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်
အဲ..စာအုပ်က ရောင်းမကောင်းလို့အရှုံးပေါ်နေတယ်ကြားမိတယ်..ကွိ ကွိ
လျို့ဝှက်အသင်းဂျီးထဲ ဘူဒွေပါဂျအူးမလဲ တိဝူးနော်…
သာမီး မခိုးပါဘူးးးးး ဦးဦးရဲကြီးရယ်။
သာမီး လက်မရွံ့တာက စားတဲ့သောက်တဲ့နေရာမှာပဲ ရှိတာပါ။
အဲဒါ ချောင်ဆင် ဝါးးးးးး ခိုးတာနေမှာ။
သူ့ တင်းဘော ကုန်ပါနီ ဒေဝါလီလို့ကြားတယ်။
ဒါနာ့ရပိုင်ခွင့် အသေးသုံးလေးဒွေဂို ဘဏ်မှာအပ်ထားဒါ… ၁၁ မီးငြိမ်းအောင်…. နိမဟုတ်တာ မပေါနဲ့…
မိဘပြည်သူများ အော်တဲ့သူလောက်တော့ မကြောက်တာ။
ဘဖော ပို့(စ) ထဲ က ကား ပေါ်လိုက်သွားလိုက်မှာဗျ။
ကျန်ဖန်ကျေးဇူးတင်ရရင် ဒင်း၆၃ မကျလို့ ဘဘဂျီး ကျားကွက်ကို ဒင်းက လန်ဘော်ဂနီ ဘီးရာအောက်မှာ ဖျက်လိုက်ပါရောလား…
လူလည်ကြီးဂျ…အင်ထရိုလေးနဲ့ တင် စိတ်ဝင်စားအောင် တပို့စ် လုပ်သွားတယ်…..လူလည်ကြီး …အဟီးဟီး
ဒီအမှုကတော့ သေချာပေါက် စိတ်ဝင်စားစရာပါလား ကိုရင်ရဲ့
ဒီအမှုကို ကျုပ်ပါ လိုက် လေ့လာချင်တယ်ဗျို့
မာမွတ်ခိုမ်အကြောင်း သိ၈ျင်ရင် အာရေဗျီစကား မွှတ်နေအောင် တတ်မှ ရမယ်နော…။